Chiitiko cheVadzidzi. Tora Rubatsiro Rwaunoda Kuti Ubudirire KuHodges University
Kugamuchirwa kuZviitiko zveVadzidzi
Kubva kuchangobva kunyoreswa kune alum, isu tiri yako yepamutemo inotungamira nzvimbo yekukubatsira iwe kuve wakabudirira mudzidzi pano kuHodges University. Mahofisi edu airi zvekare mukati kana padyo neraibhurari paFort Myers Campus kuHodges University. Pamusoro pezvo, isu tinowanikwa kune vese vadzidzi nefoni uye / kana zvinyorwa zvakare.
Dhipatimendi redu rinopa zviwanikwa nerutsigiro munzvimbo dzinotevera:
Dzimba dzevadzidzi / ADA
SAP Chirongwa Rubatsiro
Tiri pano kuzobatsira. Ndokumbira utumire email success@hodges.edu kana kufonera 239-938-7730 nemibvunzo kana kuda kukumbira masevhisi.
Yedzidzo Yekubudirira Kuraira kunoiswa pakati muhofisi yeVadzidzi Chiitiko uye maAdvisor vanopihwa kuvadzidzi zvichibva pachirongwa chavo chechidimbu uye chikoro chedzidzo. Iwe unokurudzirwa kuvaka hukama neako Mudzidzi Chiitiko Advisor uye batanidza nguva dzose yekutungamira uye kutsigirwa nezvinangwa zvako zvedzidzo.
Vadzidzi vatsva, pamwe nevaya vanodzokera kuYunivhesiti, vanokurudzirwa kupedzisa chirongwa chepamhepo chepamhepo chakagadzirwa neZviitiko zveVadzidzi. Iko kutariswa kuchakuzivisa iwe kune zviwanikwa zviripo kuti ubudirire mune zvedzidzo uye kukutsigira iwe mukufambisa ruzivo rweyunivhesiti.
Nhungamiro yeVadzidzi uye Advocacy
Vadzidzi veZviitiko zveVadzidzi vanopa gwara kwauri maererano nemibvunzo uye zvinonetsa, zvichiita kubatana kugadzirisa matambudziko angamuka. Kuendeswa kunopa mazano kunowanikwa pazvinodiwa. Kutsigira uye kuraira kwekushushikana kwedzidzo kazhinji nguva dzinotanga muZviitiko zveVadzidzi. Vadzidzi vanofanirwa kunanavira kune avo vadzidzi vevadzidzi ruzivo mupi wezano senzvimbo yekutanga yekubvunza mibvunzo nezvinetso.
Hodges Yunivhesiti yakazvipira mukubudirira kwako mune zvedzidzo, uye kukutsigira mukufambisa ruzivo rweyunivhesiti iwe unozopihwa rakasarudzika Mudzidzi Weruzivo Ruzivo. Vanachipangamazano paHodges University vanobatsira vadzidzi nekusarudza kosi uye kuronga kwehungwaru kuti vave nechokwadi chekubudirira kuyunivhesiti.
Vadzidzi veF1 vanofanirwa kureva iyo International Vadzidzi Nhungamiro kana Chengetedza Chimiro Chako Homeland Security mawebhusaiti eruzivo iwe rwauchazoda kuchengetedza yako chinzvimbo chemudzidzi. Kana iwe uine chero mibvunzo, bata Akasarudzika Chikoro Official (DSO) muHofisi yeVadzidzi Chiitiko.
Iyo Hofisi yeVadzidzi Chiitiko zvakare inopa basa rebasa kuti ikubatsire iwe nekumisikidza iro basa rezviroto zvako. Kubva CV mitemo yekubvunzurudza matipi, isu tiri pano kuti tikubatsire kukutungamira.
Mudzidzi uye Alumni Rubatsiro
Basa rekutsvaga uye kuongorora
Mushandirwi uye musika wevashandi ruzivo, kusanganisira pa-kambasi yekutsvaga uye basa renhau
Connect with CareerSource Maodzanyemba akadziva kuFlorida uyo akazvipira kukubatsira iwe kuwana chinzvimbo chaunoda
Online basa bhodhi ( www.neworleanscareer.com/)
Post mabasa anotarisana nevadzidzi uye alumni pachikoro chedu
Tsvaga mabasa akanyoreswa pachikoro chedu
Tumira mikana yekambani yako uye yekudzidzira mikana pane yedu online online board (www.neworleanscareer.com/)
Wedzera yako webhusaiti link yekambani kune yedu Yemunharaunda Vashandi 'peji
On-kambasi kutora vanhu kuburikidza neMushandirwi Anotarisa Chirongwa
Kushambadzira kwemahara kwezviitiko zvakakosha zvekuhaya
Kubatanidzwa mumabasa ebasa
Takazvipira kupa mukana wakaenzana uye mukana wakaenzana kuvadzidzi vedu. Vadzidzi vane chinetso chekuremara vanofanirwa kutibata isu kuronga mamiriro kuchikoro, kana kuti vakurukure chero rutsigiro rwakakodzera runodiwa kuti upedzise chirongwa chedzidzo. Chero ani anoda rubatsiro anofanirwa kunyorera avo vaapihwa Mudzidzi Wemaonero Edzviri zvakananga kana email success@hodges.edu; runhare: 800-466-0019.
Rumwe ruzivo nezve pekugara kwevadzidzi runogona kuwanikwa mune yedu Bhuku Rekudzidza.
Hodges Yunivhesiti yakazvipira kuchengetedza nharaunda yedzidzo isina rusarura nekushungurudzwa uye chinangwa chedu ndechekuti zvinonetsa zvevadzidzi zvinogadziriswa nekukurumidza uye zvigadziriswe nenzira kwayo kune mapato ese anobatanidzwa. Kana iwe uchinzwa sekuti chero mamiriro ari kukukanganisa haana kunaka, ane rusarura, kana anounza kuoma kusingadiwe, taura neDhipatimendi reZviitiko zveVadzidzi nekukurumidza sezvinobvira kuti tigone kushandira kugadziriso.
Tinya apa kuti uwane rumwe ruzivo.
Hodges University yakagadza edzidzo uye hunhu maitiro uye nhungamiro kusimudzira ruzivo rwevadzidzi uye mutoro kunharaunda yeYunivhesiti nenzvimbo. Vadzidzi vachityora Maitiro Ekudzidzira Kwevadzidzi vari pasi pehurongwa hwepamutemo apo izvo zvinopomerwa zviongororwe uye kugadziriswa kwechiitiko chekuranga chingaitwa.